Hiasa eo amin’ny sehatry ny fahasalamana, fambolena sy fiompiana izy ireo taorian’ny fiofanana ara-kolontsaina sy ara-teknika ary fiteny Malagasy nandritra ny 10 herinandro. Handeha hiasa eny anivon’ny fiarahamonina samihafa manerana ny Nosy mandritra ny 2 taona. Ao ireo hiara-kiasa manokana amin’ny vondron’olona eny ambanivohitra hampihatra fomba fiasa vaovao sy tsara kokoa hamokarana sy hiarovana ny tany (anisan’izany ny fambolen-kazo); hampitombo ireo karazan-tsakafo azo jifaina sy ara-pahasalamana ireo mpilatsaka an-tsitrapo amin’ny sehatry ny fiompiana. Misy kosa ny hanome tantsoroka sy hiara-kiasa amin’ireo tobim-pahasalamana na CSB (Centres de Santé de Base) sy ny vaomieran’ny fahasalamana na COSAN (Comité de santé) hampandrosoana ny fahasalamana isan-tokantrano amin’ny alalan’ny tetikady vaovao atao hoe “Care Groups” (Vondron’ny reny mpitarika ara-pahasalamana) manaparitaka ny hafatra ara-pahasalamana,.... Izany no asa miandry ireo mpilatsaka an-tsitrapo miisa 152 eto Madagasikara amin’izao. Efa mihoatra ny 1.400 ny efa niasa teto Madagasikara hatramin’ny taona 1993.